Etu esi arụ ọrụ aka nke XFCE na Linux? | Site na Linux
Etu esi arụ ọrụ aka nke XFCE na Linux?
N’isiokwu bu nke a ụzọ Anọ m na-agwa ha banyere ụzọ anyị nwere ike isi kwado nhazi anyị nke anyi Gburugburu desktọọpụ LXDEỌfọn, ugbu a ọ bụ oge maka ndị ọrụ XFCE.
N'agbanyeghị enwere ngwaọrụ ndị nwere ike ịhazi usoro ahụ, ọtụtụ n'ime ha ma ọ bụrụ na ọ bụghị ọtụtụ na-arụkarị nkwado ndabere nke ọ bụghị mgbe niile maka ihe kacha mma, mgbe anyị chọrọ ịkwado ihe ụfọdụ.
Ihe dị mma banyere mmemme ndị a bụ na ọtụtụ na-enye gị ohere ịhọrọ ihe ị ga-akwado, ọ bụ ezie na ọ dị nwute na ihe na-efu mgbe niile.
Ọ bụ ezie na XFCE desktọọpụ gburugburu ebe obibi na-eji ọtụtụ ngwaọrụ na teknụzụ Dconf ntọala enweghị ike ịbupụ ngwa ngwa maka a mfe ndabere ngwọta.
Maka ndị na-achọ ịmepụta nkwado ndabere maka ebe desktọọpụ a, ha ga-emepụta otu site na iji sistemu faịlụ.
Ọ bụrụ na ị na-achọ ịmepụta XFCE bakcup, ị kwesịrị ịpịakọ ma chekwaa faịlụ ahụ site na desktọọpụ dị oke egwu n'ime folda ~ /.config.
1 Creatmepụta nkwado ndabere XFCE
2 Ndabere isiokwu na akara ngosi
3 Etu esi eweghachi XFCE bakcup?
Creatmepụta nkwado ndabere XFCE
Ha kwesịrị ịma na ịhọrọ ịkwado ihe niile na folda ntọala ga-ewe ọtụtụ ohere karịa ịnabata faịlụ.
Maka nke a, anyị ga-emeghe ọnụ na ya ka anyị ga-eme iwu ndị a:
Nke a ọ nwere ike iwe obere oge, dabere na ọnụọgụ ozi nke folda gị nwere.
Mgbe usoro a gwụ, ha ga-enwerịrị faịlụ tar nke ha nwere ike ịchekwa, kwaga ma ọ bụ ihe ọ bụla ha bu n'uche ime ya.
Dịka ihe ọzọ, anyị nwere ike ịmepụta akwụkwọ nkwado nke faịlụ XFCE. Iji malite usoro na ọnụ anyị ga-eme iwu ndị a.
para ihe gbasara ndị ọrụ Xubuntu ga-eme ihe ụfọdụ nke ozo bu idetuo folda Xubuntu n'ime ntuziaka nhazi.
Ya nwere ihe niile n'ọnọdụ ya, anyị ga - eme iwu na - esote iji mepụta faịlụ anyị abịakọtara na data niile:
Kedu ka ha kwesịrị isi maran akụkụ nke ntọala na akụkụ ndị a na-ahụ anya nke gburugburu desktọọpụ bụ isiokwu na akara ngosi, ya mere anyị nwere ike ime nkwado ndabere nke ndị a n'ụzọ dị otu a.
Ha kwesịrị ịma na ụzọ abụọ enwere ike ịchekwa ebe a na-echekwa ha, ebe ihe kachasị dị bụ n'ime nchekwa "/ usr" na mgbọrọgwụ nke faịlụ faịlụ ahụ. Ọnọdụ ọzọ nke ọ na-enwekarị bụ n'ime nchekwa nkeonwe na "/ ụlọ".
/ usr / share / akara ngosi y / usr / share / gburugburu ma ọ bụ ~ / .icons y ~ / .mgbe.
Ugbu a ọdịnala niile na akara ngosi dị na faịlụ TarGZ, nkwado ndabere zuru ezu ma ị nwere ike ịchekwa faịlụ ndị abịakọrọ na igwe ojii, USB gaa na draịvụ ike ọzọ ma ọ bụ ihe ọ bụla i bu n'uche ịme ha.
Ozugbo emere nkwado ndabere, ị nwere ike ime ka sistemụ ahụ gbanwee, nyefee nhazi ahụ na kọmpụta ọzọ, kesaa ya ma ọ bụ ihe ọ bụla ịchọrọ ịme ya.
Etu esi eweghachi XFCE bakcup?
Iji weghachite data nanị site ọnụ anyị ga-eme iwu ndị a:
O maka okwu naanị iweghachi XFCE:
Y n'ikpeazụ maka okwu gbasara isiokwu na akara ngosi yana:
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Nkuzi / Ntuziaka / Atụmatụ » Etu esi arụ ọrụ aka nke XFCE na Linux?
dị oke anya, ana m eji MX Linux nwere ngwa ọrụ ya iji mepụta ISO omenala ndabere. Jiri desktọọpụ XFCE. Na Ubuntu ndị ọzọ ewepụtara distros, ị nwere ike iji Pinguy Builder, ọ na-arụkwa ọrụ nke ọma iji mepụta ihe oyiyi ISO ndabere. Ejiri m ya ruo n'oge na-adịbeghị anya na Xubuntu 18.04, mana agara m MX Linux 17.1, dị egwu, o nwere ọtụtụ ngwaọrụ ndị ọzọ maka onye ọrụ yana ọ dabere na DEBIAN Stable.
N'eziokwu, m na-ejikwa mx16 BY SERVER arụnyere ... mana m na-ekerịta otu esi arụ ma kwụsie ike ma dị ike ma sie ike distro a, mana ọ bara uru mmega ahụ, ịmara usoro nke XFCE. ekele maka isiokwu a.
Zaghachi Fernando Rodriguez
Olee otu iji kwado ntọala desktọọpụ Mate?